10 Qaabka ugu raqiisan ee loo daabaco guriga iyo xafiiska
Bogga ugu weyn 10 -Ka Ugu Qaalisan Ee Lagu Daabaco Guriga Iyo Xafiiska
Daabacadu maahan mid raqiis ah. Intaa waxaa dheer, waxaad fadhiisan kartaa kafateeriyada saacado gaar ahaan marka ay jiraan dad badan oo isku ujeedo ah.
Dhinaca kale, haddii aad go'aansato inaad ku daabacdo gurigaaga, waxaa laga yaabaa inaad lumiso warqad iyo khad aad u badan marka aad samayso khaladaad fudud-tani sidoo kale kharash ma leh.
In kasta oo ay labadooduba leeyihiin waxyeellooyinkooda, haddana daabacaadda guriga ayaa ka fiican. Oo waxaan ku tusi karaa qaar ka mid ah siyaabaha ugu raqiisan ee lagu daabaco guriga ama xafiiskaaga iyadoo laga fogaanayo khaladaadkaas.
I rumayso, daabacaadda guriga ayaa ka wanaagsan, ka badbaadsan, oo aad u hufan. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aanan u gudbin si aan ku tuso habka ugu jaban ee aad wax u daabacdo, aan kuu sheego sababta aad adigu u daabacanayso.
Maxaad U Baahan Tahay Inaad Naftaada Daabacdo?
1. Yaree Cabirka Dukumentiga
2. Ku Daabac Qoraal Qabyo ah
3. Adeegso Labada Dhinac ee Warqadda
4. Dib u Isticmaal Waraaqdii Qashinka
5. Isticmaal Kartoonada La jaan qaadi kara
6. Agabkii Ugu Dambeeyay ee La Caddeeyo
7. Furaha Dareeraha
8. Iibi Cartridges -kii Hore
9. Iibso Waraaqda oo Jumladeed
10. Adeega Si joogta ah
Sida laga soo xigtay History, Johannes Gutenberg waxa uu dhisay mishiinkii ugu horeeyay ee daabacaadda 1440. Waxa ay ahayd heshiis weyn markaa laakiin horumarka tignoolajiyada ee 600 ee sano ee la soo dhaafay ayaa sii waday in ay wax ka dhigto mid fudud, jilicsan, oo aad u fiican.
Mar dambe uma baahnid aqoon “murugsan” oo ku saabsan hawlaha daabacaha maadaama buuggu uu kugu hagayo hab fudud oo sharraxaad leh. Dhab ahaantii, waxaad ogaan lahayd inay u sahlan tahay beddelidda taageere.
Sababta kale ee aan fogeyn waa baahida loo qabo ilaalinta macluumaadka xasaasiga ah. Waxaa laga yaabaa inaad ka shaqaynayso mashruuc muhiim ah oo aan u baahnayn daawasho dadweyne, markaa daabacaadda dukumiinti kasta oo aad u baahan tahay waa inay noqotaa hawlgal qarsoodi ah - waa inay ahaato mid gaar ah.
Gebogebadii, markaad tixgeliso waqtiga aad ku qaadan lahayd sugitaanka makhaayad, waxaad u adeegsan kartaa inaad ku gaarto waxyaabo kale guriga markaad ku daabacdo guriga ama xafiiskaaga.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Dib -u -eegista Dhismaha Website -ka Vistaprint: Sida ay u Shaqayso | Dhismaha Website -ka ugu Fiican
Hadda waad fahantay muhiimadda iyo qiimaha daabacaadda guriga, aan ku tusno qaar ka mid ah siyaabaha la awoodi karo ee lagu gaari karo.
Hababkaas waxaa ka mid ah;
Waa xaqiiqo - marka dukumintiga la weyneeyo, ayaa khadku sii badanayaa. Waa inaad hubisaa inaad isku daydo wax kasta oo suurtogal ah si aad u yarayso xajmiga dukumintigaaga intaadan daabicin.
Marka laga reebo waa marka uu jiro qaab jira oo ay tahay inaad isticmaasho si aad u daabacdo. Si kastaba ha noqotee, haddii aysan jirin qodob noocaas ah, isku day inaad yareyso xajmiga dukumintigaaga maadaama ay tahay mid ka mid ah siyaabaha ugu jaban ee loo daabaco alaabta.
Sida laga soo xigtay Rajada Kombiyuutarka, a qaabka qabyada ah waa muuqaal laga helay madbacadaha duugga ah halkaas oo ay hoos ugu dhigi lahaayeen tayadooda iyo buuxintooda “nooca tijaabada” ee dukumintiga daabacan.
Markaad ku daabacdo qaab qabyo ah, waxaad gabi ahaanba hoos u dhigaysaa qadarka khad aad caadiyan isticmaali lahayd. Qalinka hoose waxaa loola jeedaa kharashyada ku baxaya dib u buuxinta taas oo ah hab wanaagsan oo lacag lagu keydiyo daabacaadda.
Khasaaraha kaliya ee daabacaadda qaabka qabyada ah waa tayada hoose taas oo ka dhigi karta dukumentigaagu inuu lumiyo quruxdiisa.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 9 Siyaabood oo aad lacag ugu sameysato Daabacaha 3D sanadka 2022 | Tusaha Ugu Dambeeya
Bal qiyaas sida uu u ekaan lahaa haddii bog kasta oo buug ka mid ah uu haysto xaashidiisa gaarka ah. Ma rabi lahayd inaad u dhawaato shay leh mug sare.
Si la mid ah, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho bog kasta oo warqaddaada ah. Waa inaad ku daabacdaa labada dhinac ee warqadda. Labada kaliya ee ka reeban ayaa ah marka ay jirto qeexid loo baahan yahay ama waxa aad daabacayso uu dhererkiisu gaaban yahay.
XIDHIIDHKA: Imisa Xisaab Bangi Ayaa Leh Inaan Leeyahay | Tilmaan Buuxo
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 10 -Ka Ugu Qaalisan Ee Lagu Daabaco Guriga Iyo Xafiiska
Kartuujigu waa qayb aad muhiim u ah daabacaha. Dhab ahaantii, waxay qabataa shaqada ugu muhiimsan ee daabacaha.
Markaad u isticmaalin kartridge ku habboon daabacahaaga, waxay ka dhigaysaa daabacaadda mid adag oo aan degganayn.
Marka, had iyo jeer iska hubi inaad isticmaasho kartoonada saxda ah maadaama ay tahay mid ka mid ah siyaabaha ugu jaban ee lagu daabaco guriga ama xafiiska.
Waxaa jira khaladaad gaar ah oo aad samayso kuwaas oo kordhin kara qiimaha daabacaaddaada. Dib -u -akhrinta alaabtaada kahor daabacaadda waxay kaa caawin kartaa inaad ku daabacdo qiimo jaban.
Markaad ku guul darreysato inaad dib u akhrido maaddadaada, waxaad u baahan doontaa inaad dib u daabacdo dukumenti aad daabacday kaas oo qaadan doona khad iyo warqad badan.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 15 Meelaha Ugu Fiican ee Lagu Iibiyo Buugaagta Casharrada 2022 | Khadka Tooska ah & Khadka Tooska ah
Waxaad u badan tahay inaad fiirineyso iyo kan waxaadna la mid tahay “Urrgghhh”. Waan ku fahmay si fiican laakiin tani waa xaqiiq.
Daabacayaashu waxay la shaqeeyaan hadda iyo wareegyada. Marka wareegga jabo, ma hagaajin kartid, waa inaad beddeshaa.
Soo-gaadhsiin aad u badan oo hadda loogu talagalay wareegga - gaar ahaan marka daabacaadda aan la isticmaalin - waa ammaan. Waa dhaawac waxayna yaraynaysaa nolosha wareegga wareegga.
Marka, had iyo jeer ka fuji daabacahaaga isticmaalka kadib. Waxay kuu keydineysaa lacag mana dalbaneyso ilaa seddex ilbiriqsi waqtigaaga.
XIDHIIDHKA: Boqolleyda Miisaaniyadda Arooska: Sida Loo Sameeyo Qoondayn | Tilmaan Buuxo
Cartridges -ka ayaa duqoobi kara oo daciif ah laakiin micnaheedu maahan inay gebi ahaanba xun yihiin. Intaad u baahan tahay inaad hesho kartoon cusub, waxaad xoogaa lacag ah samayn kartaa adigoo iibinaya kii hore.
Kaliya raadso kafateeri oo u sheeg go'aankaaga iibinta kartoonadaada. Waxaad la yaabi doontaa tartanka.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Maalgasho $ 100 Samee $ 1000 Maalintii | 21 Maalgashi oo Hubaal ah 2022 -ka
Qiimaha warqadu wuu sii kordhayaa marka xaalufinta dhirta ay sii socoto. Iibka warqadaada unug ma aha mid wax ku ool ah sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad wax badan hesho haddii uu khalad dhaco.
Markaa, fikradda ugu fiican iyo mid ka mid ah siyaabaha ugu jaban ee loo daabaco waa in lagu soo iibsado xaashidaada jumlad ahaan. Waxaad ku heli kartaa kartoonno oo waad kaydin kartaa. Waa warqad! Ma xumaado marka aan la ilaalin.
Ku guuldareysiga inaad u adeegto daabacahaaga waxay sababi kartaa inuu jabo. Burburkan ayaa dhab ahaantii badin kara kharashka dayactirka. Waan ogahay inaad rabto inaad ka fogaato xaaladahaas kharash kasta, markaa waa inaad sameyso waxa saxda ah - service your printer.
Inta jeer ee aad u adeegto daabacahaaga waxay guud ahaan ku xirnaan doontaa inta jeer ee aad isticmaasho. Haddii aad tahay isticmaale joogta ah, hal mar bishii ayaa wanaagsan, si kastaba ha ahaatee, haddii aadan ahayn isticmaale joogta ah, waxaad u adeegi kartaa hal mar saddexdii biloodba.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Sida Loogu Sameeyo Lacag Suuqa Suuqa 2022: Tilmaan Buuxo.
In kasta oo liiskan uu qabtay habka ugu raqiisan ee lagu daabaco guriga ama xafiiska, haddana wuxuu qabtaa siyaabaha aasaasiga ah. Waxaa jira siyaabo kale oo u baahan heer aqoon farsamo.
Marka, uma baahnid inaad aado kafateeriyada maadaama aad adigu daabacan karto oo aad sidoo kale qarashka badbaadin karto.
8 Siyaabood Oo Lacag Loogu Sameeyo Suuqa Beerka | 2022
Suuqyada Bear waa calaamada khasaaraha soo socda ee maalgeliyaha, laakiin kaliya kuwa leh maalgashiga saxda ah…
Sida Loo Buuxiyo Amarka Lacagta ee Western Union Tilmaan-Talaabo
Ogaanshaha sida loo buuxiyo dalabka lacagta Western Union, waa in qofku waligiis khalad galo. Kaliya…
17 Fikradood oo Aad U Qurux Badan Si Aad U Bixiso Deynta Oo Aad U Badan
Iyada oo masiibada iyo dhaqaaluhu xiran yihiin, dad badan oo Mareykan ah ayaa galay deyn, iyo inbadan…